Doorashadii ugu qosolka badneyd oo ka dhacdey Jowhar • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Doorashadii ugu qosolka badneyd oo ka dhacdey Jowhar
Doorashadii ugu qosolka badneyd oo ka dhacdey Jowhar
December 10, 2016 - By: Mohamed Jeenyo
Maantey oo sabti ah waxaa ka dhacay magaalada Jowhar tartanka kursigii ugu danbeeyey ee Xildhibaanada Aqalka Hoose.
photo by @MohamudDuale
Kursigan oo ay iska lahayd beesha Jidle ayaa waxaa ka taagnaa muran, kaas oo u dhxeeyey Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maxamed Xasan Nuux iyo Axmed Sheekh Nuur Cirro oo doorasho dhacdey bishii Nofeembar markii uu arkey Wasiirka Ciyaaruhu in laga guuleysanaayo uu rabshad meeshii ka ridey, taas oo sababtey in doorashada dhan maalmo la hakiyo, laguna heshiiyey in kursigaas dib loo dhigo.
Guddiga Doorashada ee Heer Federaal ayaa todobaadkan soo saarey go’aan labada musharaxba looga jojinaayo tartanka, Ugaaska Beesha Jidle laga dalabadey in uu keeno ergooyin cusub.
Arrintaas waxaa waxba kama jiraan ka soo qaadey Guddiga Doorashooyinka ee Hir-shabelle, waxaana ay maanta ooS abti ah qabteen doorasho boobsiis ah, waxaana ku tartamey Wasiirka Ciyaaraha Nuux iyo gabadh la sheegay in isagu keensadey oo lagu magacaabo Hinda Cabdullaahi.
Wasiir Nuux ayaa helay codad aad uga badan kuwii uu heley doorashadii bishii Niofeembar ee uu rabshadaha ka ridey sida guddiga doorashadu ku eedeeyeen, waxaana uu helay 45 cod.
Saxaafadda ku sugneyd goobta doorashadu ka dhacdey ayaa sheegtey in kursiga uu ku soo baxay Wasiir Nuux uu ka duwanaa tartankii hore oo dhan, oo uu u ekaa mid magacaabid ah.
Horey ayaa Madaxweynaha Hirshabeelle Cosoble ee aan weli dhisin Xukuumadiisi loogu eedeeyey in uu faraha la galay kursiga beesha Carab Soomaali eedaas oo ka timid Ugaaska beesha, waxaana ay sheegeen in ergooyinka beeshooda ay qorteen Guddiga doorashada ee Hirshabelle iyo madaxweynaha maamulkaas. Kursigaas ayaa isla maanta la doortey waxaana ku soo abxay Wasiir ku xigeenka Beeraha Cabdicasiis Saalax Camaara.
Waxaa laga war sugayaa guddiga doorashada dadban ee heer federaal waxa ay ka yiraahdaan doorashadii deg-dega ahayd ee ka dhacdey Jowhar kaas oo uu ku soo baxay qof laga reebay tartanka.